Amin’ny fetim-pirenen’i Shina, nahazo esoeso ny antsafa manaraka vakinteny nifanaovana tamin’ny olompirenena ‘tia tanindrazana’ Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Nezahan'i Beijing haseho ho mponin'i Hong Kong ifotony ilay pro-Shina
Voadika ny 10 Oktobra 2020 4:48 GMT
Saripika avy amin'ny Stand News. Nahazoana alalana.
Tamin'ny voalohany oktobra, raha nankalaza ny fetim-pirenena i Shina, voarabiraby anjotra ny media iray miezaka mafy mamaly izay tadiavin'ny Biraon'ny Fifandraisan'i Beijing ao Hong Kong.
Koa satria niato ny fankalazana ny fety tamin'ity taona ity tao an-tanàna noho ny COVID-19, dia nizara fehezam-baovao fetim-pirenena ho an'ny sehatra fampitam-baovao ao Hong Kong i Beijing, ahitana horonantsary tsy nasiana feo fifampiresahana iray, sy andian-tsary sy vaovao voasoratra.
Nandeha tamin'ny fantsona maro ny tantara tamin'ny voalohany oktobra ary nivoaka tamin'ny sehatra fampitam-baovao antserasera maro, mamoaka ny fitsidihan'i Luo Huining talen'ny Biraon'ny Fifandraisana amin'ny lazaina ho olompirenena “tsotra” ao Hong Kong.
Iray amin'ireo i Ng Pik Han, mponina iray 74 taona ao Siu Sai Wan izay milaza fa nanome HK$110,000 (14.200 dolara amerikana) ho an'i Shina tanibe izy tamin'ny fiandohan'ny taona rehefa vaky tao Wuhan ny COVID-19.
Noderain'i Luo ho vavolombelon'ny fifandraisan'i Hong Kong sy Shina tanibe ny nataon'i Ng, tamin'ny fampiasana ny fombam-pitenenana shinoa manao hoe “matevina noho ny rano ny rà.” Namaly i Ng avy eo amin'ny fanatsongana ny kabarin'i Luo tamin'ny 30 Septambra manao hoe “tsy safidy ny fitiavan-tanindrazana, fa adidy sy lalana marina.”
Olona iray hafa nanaovana antsafa i Xu Tianmin, lehilahy iray monina ao amin'ny efitra mirefy 8 metatra toradroa ao amin'ny fanorenana Shum Shui Po. Nilaza i Xu tao amin'ny horonantsary fa, noho izy tsy an'asa dia voatery niverina any an-tanindrazana any amin'ny faritanin'i Hunan ny vadiny sy ny zananivavy.
Naneho hevitra avy eo i Luo tamin'ny nandonan'ny fihetsiketseham-panoherana sy ny valan'aretina sy ny toekaren'i Hong Kong, sy ny nirosoany hilaza amin'ny [mpiara]miasa hanolo-tanana an'i Xu hahita asa vaovao.
Namoaka antsafa iray hafa nifanaovana tamin'i Xu ny gazety Pro-Beijing Wen Wei Po tamin'ny on Oktobra, izay nilazany fa nanampy tamin'ny fanomanana hetsika pro-Shina izy hatramin'ny Jona 2019, raha vaky ny hetsika fanoherana ny fampodiana olona ho any Shina, sy ny nandaniany efa ho HK$ 100.000 (tokotokony ho 13.000 dolara amerikana) hanampiana amin'ny fanadiovana ireo teny faneva sy afisy anti-Shina hiala amin'ny arabe.
Mailaka ny mpiserasera hamantatra ny mari-panondroana an'i Xu.
Raha misy sary nohetezana nitondra ny sasany hanao fehinteny amim-pahadisoana vetivety fa mpanangom-baovao avy any Beijing, tsy ela dia nazava fa tena mpanao fihetsiketsehana pro-Shina izy efa nantsafain'iny sehatra fampitambaovaon'i Shina tanibe sady pro-Beijing imbetsaka izy teo aloha.
Anisan'ny mpiserasera nihady lalina tamin'ny tantara i @Lazyyyyyyy:
3/ Toa hita i Xu fa avy any Hunan izay monina ao Hong Kong araka ny atondron'ny lahatsoratr'i Xhinhua. Miseho ho “tia tanindrazana” mpanohana ny polisy “mpikatroka” i Xu. Maro dia maro ny sariny mandray anjara amin'ireo famorian'olona anti-Etazonia sy pro-governemanta.
Tamin'ny 2 Oktobra, navoakan'i Wen Wei Po tao amin'ny voaloham-pejiny ny antsafa iray hafa nifanaovana tamin'i Xu. Tamin'ity indray mitoraka ity i Xu nilaza fa efa ho iray tapitrisa dolara Hong Kong (US$130.000 dollars) no nomeny ho an'i Shina Tanibe hanaovana fanavotana amin'ny COVID-19. Soritan'ny tantara fa ny fihetsik'i Xu dia mitaratra ny hevitry ny kabarin'i Luo momba ny “sy safidy ny fitiavan-tanindrazana, fa adidy”.
Nahatonga fanehoan-kevitra sy hanihany maro tao amin'ny aterineton'i Hong Kong ny fitadiavana ny tena mari-panondroana an'i Xu. Ireto ambany ireto ny nosintonina avy amin'ny pejy azon'ny rehetra jerena ao amin'ny Facebook:
Manao hosoka ny eny ifotony.
Mpiantsehatra iray ts maintsy nandray anjara asan'olona maro, lany ny volan'ny vatsy fikojakojana ny fahamarinan-toerana.
Tahaka ny soloky an-telefônina ny karazan-tsangana tahaka izao, tsy misy mino azy ireo fa mbola tohizany ihany.
Tokony hahay izao ry mpanohana ny sarangan'ny mpitondra. Amidio ny tranony, omeo ny firenena fa raha tsy izany tsy tia tanindrazana ry zareo.
Aleksandr Solzhenitsyn, Rosiana mpanoratra sady nahazo ny loka Nobel [naotin'ny mpanitsy: tsonga niely fatratra tsy voamarina]: “Fantatray fa mandainga ry zareo, fantrary ry zareo fa mandainga ry zareo, Fantratry ry zareo fa mahafantatra izahay fa mandainga ry zareo, mahalala ihany koa ry zareo fa mahafantatra izahay fa mandainga ry zareo, fa mbola mandainga ihany ry zareo.“
6 ora izayKambodza